Moodooyinka joodariga hawada guga ee qiimaha jumlada | Rayson
Rayson ee Rayson Soonaha Soojiiladeed, Housha Road, Shishin, aagag tikniyoolajiyadda sare, Guangdong, Shiinaha. Alaabada ugu weyn ee dhiirrigelinta xirfadeed ee Xirfadda Farshaxanka wanaagsan ee dharka jilicsan ee dharka lagu xiro ee sanduuqa soosaarayaasha. Dhiirrigelinta qiimaha wanaagsan ee dharka wanaagsan lagu xardhay Tijaabooyin badan oo waxqabadka waxqabadka ah oo loogu talagalay Raysson ayaa la qabtay. Waxay yihiin tijaabada ka hortagga bakteeriyada, tijaabinta unugyada ka noqoshada, hubinta qoyaanka, qoyaanka, adkaanta, iyo tijaabinta xoogga. Dhiirrigelinta qiimaha wanaagsan ee dharka jilicsan oo lagu xardhay Shayga ayaa soo saaray xoog weyn. Waxaa laga sameeyay qalab adag oo aad u adag iyo qaybo, waxay u istaagi kartaa cimilo adag, naxdin, gariir, iyo baabi'inta.
Idaacadda Rayson, hagaajinta teknolojiyadda iyo hal-abuurka ayaa ah faa'iidooyinkeena aasaasiga ah. Tan iyo markii la aasaasay, waxaan diirada saareynay horumarinta alaabada cusub, hagaajinta tayada wax soo saarka, iyo u adeega macaamiisha. Moodooyinka joodariga Hawada Guga Waxaan balan qaadayaa inaan ku siino macmiil kasta oo leh alaabooyin tayo sare leh oo ay ku jiraan moodellada joodariga hawada guga iyo adeegyada aasaasiga ah. Haddii aad rabto inaad faahfaahin dheeraad ah ka ogaato, waxaan ku faraxsanahay inaan kuu sheegno Markaa haddii dadku jecel yihiin dareemahan, way jeclaan doonaan.